Wii U, ihe njikwa egwuregwu zuru oke maka egwuregwu ochie na raspo Pi | Akụrụngwa n'efu
Ọfịs, Wii U bụ otu n'ime ọdịda ọdịda kachasị ama nke Nintendo. Mgbe ihe ịga nke ọma nke Wii, Wii U adịghịdị jikwaa iji kpuchie egwuregwu egwuregwu vidiyo a banyere ahịa na ihe ịga nke ọma, nke pụtara na ruo ọnwa ole na ole, a kwụsịla egwuregwu egwuregwu ahụ na egwuregwu vidiyo enweghị ụdị a. Nke a bụ akụkọ ọjọọ nye ndị ọrụ ya, belụsọ na anyị bụ ndị hụrụ Ngwaọrụ Akụrụngwa N’efu.
Otu onye ọrụ aha ya bụ Banjokazooie zipụrụ a ndu ịgbanwe Wii U n'ime a dị ike ochie retso console ekele utu Pi. Nke a na mgbanwe nke console bụ na-akpali n'ihi na ọ dịghị mkpa ọ bụla e biri ebi casing ma ọ bụ ọ bụla USB jikọọ console na ike tinyekwa.
Ihe oru a abughi nani zuru oke mana a nwalere ya ma rụọ ọrụ nke ọma. Maka nke a, anyị ga-achọ naanị Wii U, ihe mbata Pi 3 na ụfọdụ kọmputa na anyị nwere ike ịchọta na ụlọ ahịa kọmputa dị n'ịntanetị ọ bụla. Ozugbo anyị nwere iberibe ndị a, anyị ga-aga n'ihu iwu ụlọ.
Ekwesiri ighota onye ndu Pi-Power, oru ngo na Github nke ahụ ga - enyere anyị aka ịkwado bọọdụ ahụ ka ọ rụọ ọrụ dị ka ihe egwuregwu ikuku. Banyere ngwanrọ ahụ, n'ezie, A na-eji RetroPie eme ihe, sọftụwia ga - enyere anyị aka ịgba ọsọ ọ bụla emelụ egwuregwu emulator yana egwuregwu ọ bụla maka mgbakọ ndị ahụ.
Wii U mod oru ngo gabigara nani shei iwerekwa, dika the Pi ga-ejikọta ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla na njikwa nke Wii U, na-elele ihe niile na ihuenyo 6,5-inch. Ya mere na n'ikpeazụ, a mgbanwe nwere ike dị ọnụ ala karịa na-akpali mmasị karịa ọzọ ochie egwuregwu console oru ngo. Enweghị na-ewere n'ime egwuregwu na video egwuregwu na console ga-na a mgbanwe, a ibu na zuru ezu ọnụ ọgụgụ karịa Wii U katalọgụ. N'ezie, a mgbanwe jupụtara n'ime a Nintendo egwuregwu console na ndụ. Not cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Wii U, njikwa egwuregwu zuru oke maka egwuregwu vidio na Raspberry Pi